Isikolo se-Nyingma saseBibetan Buddhism
Unqulo & Umoya Tibetan & Vajrayana
Isikolo saseBibetan Buddhist School of Perfect Perfect
Isikolo saseNyingma, esabizwa ngokuba yiNymmapa, nguyena mdala kwizikolo zaseBibetan Buddhism . Kwasungulwa kwiTibet ngexesha lolawulo lukaMlawuli uTrisong Detsen (742-797 CE), owamkela i-tantric i-Shantarakshita kunye nePadmasambhava ukuya eTibet ukufundisa nokufumana i-monastery yokuqala yeBuddh eTibet.
UbuBuddha beye kwaziswa kwiTibet ngo-641 CE, xa iChina Princess Wen Cheng yaba ngumtshakazi weNkosi yaseTibet Songtsen Gampo.
Umthendeleko waletha naye umfanekiso okaBuddha, owokuqala eTibet, namhlanje ohlala eThempeli laseJokhang eLhasa. Kodwa abantu baseTibet baxhathisa ubuBuddha baze bakhetha inkolo yabo yesizwe, Bon.
Ngokutsho kweengoma zeBibetan zeBuddhist, ezatshintsha xa uPadmasambhava ebiza oothixo baseTibet waza wabaguqula eBuddhism. Oothixo boyikayo bavuma ukuba ngaba- dharmapala , okanye abakhuseli be-dharma. Ukususela ngelo xesha, iBuddhism yinto inkokheli yokuqala yabantu baseTibetan.
Ukwakhiwa kweSamye Gompa, okanye i-Monastery yeSamye, mhlawumbi yagqitywa malunga ne-779 CE. Lapha i-Tibetan Nyingmapa yasungulwa, nangona i-Nyingmapa iphinda ilandele imvelaphi yayo kwiminitha yangaphambili e-Indiya nase-Uddiyana, ngoku eyiSwat Valley yasePakistan.
Kuthiwa iPadmasambhava yabafundi abangamashumi amabini anesithandathu, kwaye kubo bavela kwinkqubo eninzi neyinkimbinkimbi yemida yokudluliselwa.
I-Nyingmapa yiyena kuphela isikolo saseBibetan Buddhism engazange ifuthe ngamandla epolotiki eTibet.
Enyanisweni, kwakungavumelekanga ngokungaqhelekanga, kungekho ntloko eyongamela isikolo kude kube ngamaxesha anamhlanje.
Ngexesha elidlulileyo, iinqununu zama-"mama" ezintandathu zakhiwe eTibet kwaye zazinikezelwa kwiNymmapa. Le ndawo yayiyiMonastery yaseKathok, i-Monastery ye-Thupten Dorje Drak, i-Ugyen Mindrolling Monastery, i-Palyul Namgyal yaseJangchup iNgonyana yamaLing, iDzogchen Ugyen Samten i-Monastery yeColor, neZhechen Tenyi Dhargye Ling.
Kule ndawo, iindwendwe ezininzi ze-satellite zakhiwa eTibet, eBhutan naseNepal.
I-Nyingmapa ihlukanisa yonke imfundiso yamaBuddha ibe yi- yanas ezintandathu, okanye izithuthi. I-Dzogchen , okanye "ukuphelela okukhulu," yiyona nto ephezulu kunye nokufundisa okuphambili kwesikolo saseNyingma.
Ngokutsho kwe-Dzogchen ukufundisa, intsingiselo yazo zonke izidalwa ukuqonda okumsulwa. Ukuhlanzeka ( ka dog) kuhambelana nemfundiso kaMahayana ye- sunyata . Inja edibeneyo kunye nokwakheka kwemvelo - lhun sgrub , ehambelana nomvelaphi oxhomekeke kuyo - izisa nge- rigpa, ukuvusa ukuqonda. Umendo weDzogchen uhlakulela i-rigpa ngokusebenzisa ukucamngca ukwenzela ukuba i-rigpa igeze ngezenzo zethu kwimpilo yemihla ngemihla.
I-Dzogchen yindlela e-esoteric, kwaye ukusetyenziswa okuqinisekileyo kufuneka kufunyanwe kumphathi weDzogchen. Isiko le- Vajrayana , elithetha ukuba lidibanisa ukusetyenziswa kweempawu, isithethe, kunye nezenzo ze-tantric ukwenzela ukuvumela ukuhamba kwe-rigpa.
I-Dzogchen ayikho kuphela kwi-Nyingmapa. Kukho i-Bon ikhophi ephilayo equka iDzogchen kwaye ibango layo. Ngezinye izikhathi iDzogchen iqhutyelwa ngabalandeli bezinye izikolo zaseTibetan. I- Fifth Dalai Lama , yesikolo saseGelug , yaziwa ngokuba yenzelwe ukuqhelisela iDzogchen, umzekelo.
Izibhalo zikaNyingma: iSutra, iTantra, iTemma
Ukongeza kwi-sutras kunye nezinye iimfundiso eziqhelekileyo kuzo zonke izikolo zaseBibetan Buddhism, i-Nyingmapa ilandela iqoqo le-tantras elibizwa ngokuthi i-Nyingma Gyubum.
Kule tyenziswa, i- tantra ibhekisela kwimfundiso kunye neencwadi ezizinikezelwe kwi-Vajrayana.
I-Nyingmapa nayo ineqoqo yeemfundiso eziveziweyo ezibizwa ngokuba yi- terma . Umbhali we-terma kuthiwa yiPadmasambhava kunye nomqabane wakhe uYehe Tsogyal. I-terma yayifihliwe njengoko ibhaliwe, kuba abantu babengakakulungeli ukufumana iimfundiso zabo. Zifumaneka ngexesha elifanelekileyo ngabaphathi abaqeshweyo ababizwa ngokuba yi- terts , okanye abatyebileyo .
Uninzi lwe-terma efunyenwe kude kube sele luqokelelwe kumsebenzi we-volume-volume ebizwa ngokuba yiRinchen Terdzo. I-terma eyaziwa kakhulu yiBardo Thodol , ebizwa ngokuba yi "Tibetan Book of Dead."
Iimpawu zoLuntu eziNye
Enye into eyingqayizivele yaseNyingmapa yi "sangha emhlophe," amagosa amiselweyo kunye noogqirha abangenalo. Abo baphila ngokwesiqhelo somthonyama ngokwesiko, kunye nobuncwane, ubomi kuthiwa "kwi-sangha ebomvu."
Isithethe esisodwa seNymmapa, umgca we-Mindrolling, uye waxhasa isithethe sabamakhosikazi besifazane, esibizwa ngokuba ngumgca weJetsunma. I-Jetsunmas ibe yiintombi ze-Mindrolling Trichens, okanye iintloko ze-Mindrolling lineage, ngokuqala ngeJetsun Mingyur Paldrön (1699-1769). I-Jetsunma yangoku nguYe Eminence Yetsun Khandro Rinpoche.
Ukuhlasela kweTshayina kweTibet kunye nokuphambuka kuka-1959 kwabangela ukuba iintloko zeNyongmapa zihlukane ukusuka eTibet. Izithethe zaseMonastic ezisungulwe eIndiya ziquka iThekchok Namdrol Shedrub Dargye Ling, e-Bylakuppe, e-Karnataka State; Ngedon Gatsal Ling, eClementown, Dehradun; U-Palyul Chokhor Ling, u-E-Vam Gyurmed Ling, uNechung Drayang Ling, kunye neThubten E-vam Dorjey Drag e-Himachal Pradesh.
Nangona isikolo saseNyingma sasingazange sibe nekhanda, ekuthinjweni uchungechunge lweama lama eliphezulu liye laqeshwa kwisikhundla sokulungiselela injongo. Intsha yakutshanje nguKyabjé Trulshik Rinpoche, owafa ngo-2011.
Yintoni 'oyiNkosi yoThixo'?
I-Tibetan Buddhist Canon
Intshayelelo yeBuddhist Tantra
Iifayile ze-James Patterson zokubukela
KwiNkomfa yeNtshona Coast
Indlela amaBakala amathathu weRhetoric ahlukene ngayo
UAlesandro Omkhulu, iNkokheli yamaGrike yamaGrike